Wasaarada Awqaafta iyo Arrimaha Diinta oo soo gabagabeysay wajiga 2aad ee Wacyigelinta Covid-19 - Jowhar Somali Leader
Home News Wasaarada Awqaafta iyo Arrimaha Diinta oo soo gabagabeysay wajiga 2aad ee Wacyigelinta...
Wasaarada Awqaafta iyo Arrimaha Diinta oo soo gabagabeysay wajiga 2aad ee Wacyigelinta Covid-19
Wasaarada Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ee Dowlada Federalka ayaa maanta soo gabagabeysay wajiga 2aad ee Wacyigelinta cudurka Covid-19.
Munaasabada lagu soo gabagabeynayay wajiga labaad ee ololaha wacyigelinta cudurka Covid-19 oo ay fulinayeen qaar ka mid ah shaqaalaha wasaarada Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ayaa waxaa ka soo qeybgaleen Wasiir ku xigeenka wasaaradda Awqaafta & Arr Diinta Osman Adam Dhuubow iyo saraakiil ka tirsan wasaarada.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda Awqaafta & Arr Diinta Osman Adam Dhuubow oo la hadlay shaqaalahan ayaa uga mahadceliyay mudada saddexda bilood ah oo ay ku jireen howlaha wacyigelinta cudurka Covid-19.
Sidoo kale wasiirka ayaa munaasabadan oo ka dhacday masjidka isbahaysiga islaamka ee magaalada Muqdisho waxa uu guddoonsiiyay shahaadooyin iyo abaalmarino shaqaalihii ka qeybgalay barnaamijka wacyigelinta cudurka Covid-19.
Wacyigelinta ay fuliyeen shaqaalaha Wasaarada Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ayaa waxaa gacan ka geystey xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya iyadoo maamulka gobolka Banaadirna uu qeyb ka ahaa hirgelinta ololahan wacyigelinta Covid-19
Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ayaa waxaa ay bilowday olole wacyigelin ah oo looga hortagayo caabuqa Covid19 bishii maarso ee sanadkan,waxayna wasaaradu u qeybisay masaajidyada iyo iimaamyada magaalada Muqdisho qalab loogaga hortago cudurka Covid-19.
wacyigelin la soo gabagabeeyay